Nweta ọtụtụ ihe ntanetị gị na OpenWrt: nnwere onwe ikuku | Site na Linux
Nweta ọtụtụ ihe na rawụta gị na OpenWrt: nnwere onwe ikuku
msx | | Nkesa, GNU / Linux, Noticias, Netwọk / Sava
www.openwrt.org // #enwereke@Freenode
Mepee bụ nkesa GNU / Linux dabere na Debian GNU / Linux na-enye anyị ohere iri uru nke teknuzu e ji mara nke anyị rawụta ka kacha n'ofè ojiji na anyị nwere ike inye ya na femụwe na emeputa wụnye.
Ọ bụrụ na anyị achọọ Mepee na Wikipedia Anyị nwere ike ịgụ:
«Mepee bụ ihe nkesa GNU / Linux na-ekesa ngwa ngwa ejiri maka ngwaọrụ agbakwunyere dịka ndị na-eme njem ụgbọelu.
Nkwado na-ejedebe na Linksys WRT54G, mana ebe ọ bụ na mgbasawanye ngwa ngwa, nkwado maka ndị nrụpụta na ngwaọrụ ndị ọzọ, gụnyere Netgear, D-Link, ASUS, na ndị ọzọ ole na ole. Ihe rawụta kachasị ewu ewu ka bụ Linksys WRT54G na ASUS WL500G. Mepee ọ kachasị na-eji akara akara iwu, mana nwekwara ihu igwe WEB na-emewanyewanye. A na-enye nkwado nkwado dịka n'ọtụtụ oru ngwanrọ Free, site na forums na ọwa IRC.
Mmepe nke Mepee Ebu ụzọ bulie ya maka ikikere GPL, nke mere ka ndị nrụpụta niile ahụ mezigharịrị ma meziwanye koodu ahụ, ịhapụ ya ma nyekwuo aka na ọrụ ahụ n'ozuzu ya.
Nke nta nke nta, ngwanrọ ahụ na-etolite ma na-etinye atụmatụ na ọtụtụ ndị ọzọ na-emepụta nke ngwaọrụ azụmahịa maka ngalaba na-abụghị ọkachamara enweghị, dị ka QoS, VPN na atụmatụ ndị ọzọ na-enye Mepee nke ngwaọrụ di ike ma di egwu, kwesiri iji ngwaike ebe o na-agba Mepee ọ bụghị naanị maka iji dị ka ndị na-agagharị agagharị, kama dị ka sava faịlụ, P2P ọnụ, sava WEBcam, firewalls ma ọ bụ ọnụ ụzọ ámá VPN. »
1 OpenWrt na dd-wrt
2 Atụmatụ OpenWrt
3 Ọnọdụ mgbake / FAILSAFE
OpenWrt na dd-wrt
Na mgbakwunye na Mepee E nwere dd-wrt nke bụ atọ ọzọ ndụdụ nke Mepee na ebumnuche nke inye ngwaahịa azụmaahịa; n'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịzụta ndị na-anya ụgbọ mmiri na ngwa ngwa dd-wrt etinyeworị nkwado ma kwụọ nkwado maka ndozi na ihe mere na ha.
Isi ihe dị iche n'etiti Mepee y dd-wrt bụ na nke ikpeazụ enweghị a console maka shei ohere, anaghị akwado echichi nke ọhụrụ software na bụ ihu ọma a azụmahịa version nke Mepee nke dị nnọọ nso na femụwe na ụdị azụmahịa dị iche iche nwere ike iweta site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mana jiri njirimara ndị ọzọ siri ike.
Offọdụ n'ime isi ihe dị na ya dd-wrt dị na njirimara ya dịka ọ na-adọrọ adọrọ karịa nke Mepee jiri ngwa ndị ọzọ anwuru edozi maka ndị ọrụ njedebe ma ọ bụghị sysadmins ma ọ bụ ihe omume ntụrụndụ.
Ọzọ dị mkpa dị iche bụ na n'ozuzu na femụwe nke dd-wrt dị n'otu akara ahụ 'nkwụsi ike' ngwa ngwa nke Mepee na Ya mere dịtụ n'azụ mmepe version nke, -eme ihe n'eziokwu, na-eme incredibly ọma na maka oge nkume siri ike, Ọ dịghị mgbe m nwere nsogbu ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ị na-ele ya anya mbụ dd-wrt adịghị ka ihe na-akpali dị ka Mepee Ọ dị mma iburu ya n'uche maka ikpe ndị ahụ na-enweghị ngwa ngwa Mepee n'ihi na anyị na ngwaọrụ ma ọ bụ na anyị chọrọ nwere a ọzọ mara interface adabara nkezi ọrụ.
Ma oru, Mepee y dd-wrt Ha nwere nnukwu obodo ọ bụla nke na-akwado ma ọrụ na mmepe na-aga n'ihu, nke na-eme ka anyị nwee nkwado maka ogologo oge. Obodo ndi a mepere ma dikwa enyi, obu ezie na tupu ha juo ajuju, ajuru onye oru ka o guo akwukwo kwesiri ekwesi ma lelee wiki na forums anya, ebe o doro anya na emeela ya ma za ya na mbu.
N'ezie, ajụjụ dị ka "M arụnyere openwrt na ọ dịghị ihe dị njọ, gịnị ka m ga - eme?" sudo rm -rf / na itinye paswọọdụ gị> = D.
Njirimara nke Mepee
Uru nke iji Mepee ha dị otutu:
bụ arụ ọrụ zuru oke mini distro, "mini" ebe a pụtara na:
a) nwere ngwugwu pere mpe
b) Emeputara ya ka o pere mpe ma enwere ike itinye ya na obere oghere nchekwa (dika 2mb!)
Wifi modul na-kachasị otú iji Mepee anyị ga-eji router anyị nke ọma dịka ọ ga-enwe akara ngosi ka mma: ọ ga-adị ike ma dokwuo anya karịa na ngwaahịa ngwa ngwa nke sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
ọ bụ ezie na elu-ọgwụgwụ, processor-kpụ ọkụ n'ọnụ ngwa dị ka PHPAnyị nwere ọtụtụ ngwanrọ na-atọ ụtọ iji wụnye dabere na njirimara ọrụ nke ngwaọrụ anyị.
. Ọ bụrụ na anyị nwere oghere na ikike ngụkọta oge kwesịrị ekwesị, anyị nwere ike ịnweta sava weebụ achọrọ na-agba n'otu oge:
a) ihe nkesa faịlụ - NFS y SMB / CIFS
b) onye ahia IRC (na nke m WeeChat) na onye ahịa maka ozi ngwa ngwa BitlBee tinyere. N'ụzọ dị otú a ma ọ bụrụhaala na anyị anaghị agbanyụ ma ọ bụ bufee router, anyị ga-adị 100% n'ịntanetị. Ntị: ndekọ IRC, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị ejikọtara na ọtụtụ ọwa (n'ọnọdụ m enwere 31 n'oge ahụ) nwere ike weghara ọtụtụ ohere ngwa ngwa. Ọ bụrụ na anyị ga-agba ọsọ ahịa IRC na rawụta, ana m akwado ijikọ mpaghara nchekwa mpụga na ịchekwa ndekọ ebe ahụ.
c) Mepụta ma ọ bụ ịbụ akụkụ nke Open Mesh network ma ọ bụ ntupu ikuku na netwọk, nke a makwaara dị ka BATMAN
d) sava weebụ dị ka ahuhu y nginx
e) enweghị oke nke ngwa nchekwa dịka Kismet, aircrack-ng, arpwatch na macchanger n'etiti ndị ọzọ; nke ahụ, ohere enweghị njedebe! Iji maa atụ: chegodi na maka ihe kpatara X, ha chọrọ iji nweta netwọkụ Wi-Fi ụfọdụ mana n'ezie ha amaghị pwd ha ma ọ bụ adreesị MAC kwere ka ha jikọọ, na usoro iwu, ha nwere ike iji router dị mfe nke ha wụnyere. Mepee jiri ngwa ndị dị mkpa ma hazie ya ka ọ gbanye okporo ụzọ ikuku, chọọ okwuntughe, nweta adreesị MAC edenyere, jikọọ na netwọkụ ma zitere gị ozi email na-agwa gị na ha nọ n'ime netwọkụ a kwuru, yana data dị mkpa maka gị. jikọọ na ebe ọ bụla ha nọ. Ozugbo emere nke a, naanị ihe ha ga-eme bụ ịchọta ebe ha nwere ike zoo ngwaọrụ ejikọrọ na netwọkụ eletriki, dịka o kwere mee na netwọkụ nke ha nwere mmasi ma hapụ ya ka ọ mee anwansi ya ;-D
(Tom Cruise bu agwa na-esote anyi dika El Indio kwuru tupu erere onwe ya, «Ọdịnihu bịara n'oge gara aga")
f) nkesa na-ebipụta, oge ihe nkesa (NTP), wdg.
g) N'ịbụ onye dịpụrụ adịpụ nke geeks na geeks doro anya na anyị ga-enwe ike ịnweta site na ssh na n'eziokwu anyị ga-eme ya dị ka nke a na mbido ịwụnye eserese eserese na hazie ya: ọ bụghị na ọ mara mma!?
h) enwere ike ịmepụta ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè (naanị nke HW n'onwe ya na-ejedebe) nke netwọk WiFi =)
i) ike nile nke firewall kachasị mma n'ụwa, iptables na ọrụ anyị site na njikwa na site na eserese eserese.
j) ngwa dika tmux no na aka, just do a # opkg melite && opkg wụnye tmux nke mere na ịrụ ọrụ n'ime njikwa n'ime rawụta anyị bụ ihe obi ụtọ
k) Dịka ị nwere ike ịchọpụta, njikwa ngwugwu na-eji syntax yiri nke njikwa ngwugwu Debian GNU / Linux Ee gịnị kpatara oke ọ dabere na ipkg ochie nke n’aka nke ya were dpkg / apt dị ka ntụnye aka. Kpachara anya, enwela echiche ọ bụla banyere njikwa ngwugwu a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị ike ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe dị ka ụmụnne ya ndị okenye, mana ọ na-arụ ọrụ ya nke ọma.
l) Anyị nwere ọtụtụ ihu ihu Weebụ ka anyị wee nwee ike ịhọrọ dabere na mmasị na mmasị anyị. Maka nke m na mgbe m nwesịrị ha niile m hapụrụ Luci ebe ọ bụ na ọ bụ lightest na-enye ohere ka m nweta a dịgasị iche iche nke ọrụ nke Mepee. Na ọ bụ ìhè abụghị obere data ebe ọ bụ na ụlọ m rawụta dị umeala n'obi TP-Njikọ TL-WR2573ND na ohere a na - agbanwe agbanwe bu naanị 8mb, yabụ obere ohere m na - eji na - eme ihe efu dị ka ntanetị websaịtị mara mma ma dịkwa mma karịa ka m ga - ebu ngwa.
m) n'etiti ọrụ ndị ọzọ nwere nkwado zuru oke nke osisi Jumbo na VLANS!
n) Njirimara ndị ọzọ gụnyere ndị ọtụtụ ndị na-ahụ maka ụlọ / SOHO na-esite na igbe ahụ pụta dị ka njikọta ARP, ntụgharị ụzọ, aha nnabata, aha DHCP, njikwa ohere oge, ikike iji ọtụtụ DNS maka netwọkụ ọ bụla, wdg.
o) Beingbụ GNU / Linux distro anyị ga-enwe nnweta zuru oke na ndekọ sistemu, ndekọ kernel, daemons anyị chọrọ ịgba ọsọ na mbido, wdg, niile dịka distro ha na-eji.
p) Ọ gụnyere ọmarịcha - yana ọmarịcha - hacks iji mee ka ọkụ router zaghachi omume ụfọdụ, n'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ịhazi ha ka ha gbanye n'ụzọ ụfọdụ dabere na otu anyị si eji ngwaọrụ (eriri, netwọị ikuku, dị ka router, switch, wdg), mgbe anyị nwetara ngwaọrụ USB ejikọrọ na rawụta dịka draịvụ mpụga ma ọ bụ nbipute, wdg.
q) n'etiti ngwa ndị ọzọ anyị nwere ike iwunye VPN njikwa, Nagios, Munin (nke ka mma na Free Nagios), wụnye MTD (Nzipu ozi Mbupu) ma gbanwee ya na sava email, wụnye mc (Ọchịagha etiti abalị), ihe nkesa Avahi / Bonjour / Zeroconf, ma ọ bụrụ na anyị nwere mpụga HD jikọọ na nchịkọta egwu anyị, anyị nwere ike ịgba mmụọ ọjọọ nke mpd na rawụta nke ga-eme ka anyị jikọọ ha na ya site na igwe ọ bụla na-ejikọ na rawụta n'agbanyeghị ma ha dị na netwọk dị iche iche, wdg.
r) E nwere ọtụtụ narị nchịkọta ndị ọzọ dị iche iche ka ị nwee ike ime ihe ị chọrọ na rawụta gị, ịghara ịkọ ma ọ bụrụ na ịnwere ngwaọrụ iberibe. Dị ka ọ dị na GNU / Linux, naanị njedebe bụ echiche onye ọrụ
Na nkenke, Mepee ọ bụ nrọ nwatakịrị ahụ mezuru = D.
Mgbake mode / ADỊGHỊ ECHICHE
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ ga-ekwe omume na oge mbụ anyị tinyegoro ngwa ngwa a, anyị ga-ahapụ onye na-ahụ maka ihe nrụzi maka ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ maka ihichapụ ma ọ bụ weghachite ihe anyị na-ekwesịghị imetụ aka - mana na ọdịdị anyị na-achọ ịmata ihe na-akpali anyị ime ya xD
N'ezie, onye editọ bịanyere aka n'akwụkwọ a, m na-ekwu, nwere osisi echiche nke ihichapụ ihe ntanetị ntanetị iji hazigharịa ha nke ọma na-anọghị na rawụta ma ghara inwe ike ịnweta ya ebe ọ bụ ezie na usoro agbakwunyere na-arụ ọrụ ebube ọ nweghị ọrụ ntanetị ọrụ enyere - ee, enwere m ọgụgụ isi, ọjọọ! BOLUDO !!!
Ndị mmepe nke Mepee hụla ụdị ikpe ahụ ma nye interface maka ọnọdụ buut dị mma -odighi nma- ka anyị nwee ike ịme ohere mberede ma tọgharịa sistemụ ahụ.
Ọ dị mkpa ka ewere nke a n'ime akaụntụ n'ihi na ya na femụwe nke Mepee ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na bọtịnụ nrụpụta nke ndị na-anya gị agaghị arụ ọrụ dịka a tụrụ anya ya, ya bụ na ị ga-eweghachite nhazi nke otu ihe na ntọala ụlọ ọrụ. N'ezie, a na-eji bọtịnụ ahụ na ọnọdụ odighi nma de Mepee mana naanị izipu ihe mgbaama na akụrụngwa n'oge ụfọdụ yana na anyị nwere ike ịnweta ngwaọrụ ahụ ọzọ telnet ma obu ssh.
O nwekwara ike ime ha brik rawụta ma ọ bụrụ na ha wụnye ihe oyiyi na-ekwesịghị ekwesị maka ya, ọ bụrụ na mgbake nke ngwaọrụ ahụ dịtụ mgbagwoju anya karị na usoro ahụ gụnyere ịmeghe ya iji nweta ihe jikọrọ ya, na-erezi ngwaọrụ elektrọnik nke anyị ga-eri nri. site na eriri USB ejikọrọ na igwe anyị wee jikọọ rawụta site na serial console, rụọ ọrụ sava FTP -TFTP- dị oke oge iji detuo ngwa ngwa ahụ, tọgharịa onyonyo ọhụụ, wdg, ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị emeghị ya nke ọma, anyị nwere ihe ize ndụ nke ịgbanye router.
Ndị a bụ ụfọdụ onyonyo nke shei BusyBox na ihu igwe weebụ Luci:
Ruo mmalite iwebata Mepee, emesia m ga ede ederede ntughari di nkenke, karie ihe obula enwere ike ichota karisia ka awa nke nyocha nke m tinyere tinye echekwa ihe ederede na igbanwe echiche na IRC rue mgbe m ghapuru onye na-acho ihe omuma m dika m nwere ya taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Nweta ọtụtụ ihe na rawụta gị na OpenWrt: nnwere onwe ikuku
Hey ekele maka ịgbakwunye mkpado y los tags, cuando me dí cuenta que nos puse ya había enviado el artículo! :)
Ma nke ahụ!? Gini mere ederede ederede dika odi otua? Ohhh na na, na iberibe koodu mkpado! xD
Enwere m ajụjụ. Kedụ banyere ndị na-anya ụgbọ mmiri nke ndị ụlọ ọrụ ISP nyere? Ha anaghị akwado ha? Ana m ekwu nke a n'ihi na ọ bụrụ na m nwaa itinye ya na m. (Ọ nwere Ikuku) Na mberede, m kwụsịrị ọrụ na njedebe ma eleghị anya ha agaghị edozi nsogbu ahụ n'ihi na ọ bụ m bụ onye mebiri ya 😛
Amaghi m ya, abum onye ohuru na Linux n’agbanyeghi na m nwere ihe kariri afo abuo iji ubuntu ma ugbua xubuntu (a mutara m ihe m nwere ike n’oge amaghi ma n’ihi oru, apughi m ihapu windo), achoro m na I bulite nkuzi a n’ihi na enwerem otutu ndi uzo. N'ulo nke m na-ejighi ma m ga-acho ha
Nwere ike idezi / gbanwee / chịkọta ihe openwrt site na tplinlk rawụta ma ọ bụ ọzọ iji tinye vpn ma ọ bụ njikọ proxy?
Ozi dị mma, na-eche ntuziaka nwụnye
Ọtụtụ afọ gara aga m arụnyere dd-wrt na-enweghị nsogbu ma ọ rụọ ọrụ nke ọma na Linksys WRT54G, a maghị OpenWrt. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnwale ya, jiri nlezianya gụọ ntụziaka ahụ, ka ha ghara ịkwụsị "brik".
Ederede mara mma, ana m ahapụ ya ka ọ na-akanye ma ana m eche maka ndu ahụ e kwere na nkwa ...
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla gbasara akwa mmiri Linksys, ọ dịkarịa ala m ga-enwe mmasị ịnụ banyere ya.
Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu.
Nke mbu, ekele gi na blog. Ọ bụ impeccable, otu onye nwere ike na-agụ na-akpali ozi ọma banyere GNU / Linux ụwa na nnọọ uru Nkuzi, na asụsụ inweta niile.
Nke abuo, achoro m igwa gi banyere oke oru tinyere OpenWrt: PirateBox. Ihu ọma, a rawụta ike na-agba ọsọ OpenWrt na-eji (fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-eji TP Link MR3020, n'ihi na ya ala price), ịkọrọ faịlụ site na WiFi netwọk kpamkpam n'amaghị ama.
Ana m atụ anya oge ọkọchị iji oge m n'efu wee bido igwu egwu a, ọkachasị ịmegharị ọrụ a. Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịmatakwu ihe nkuzi na nkuzi nkuzi, njikọ ahụ bụ http://daviddarts.com/piratebox/
Ejiri m DD-WRT ruo ọtụtụ afọ, enwere m ọtụtụ nhọrọ na ntọala ya mgbe niile. Mgbe ahụ, ezutere m Tomato ị nwere nhọrọ ole na ole karịa DD-WRT mana ijikwa obere netwọkụ ọ kachasị mma m hụworo. Debe ihe niile dị ka uwe silk ma ị nweta nkwụsi ike dị egwu ọbụlagodi na ịnwere ndị ọrụ na-akpasu iwe na ndị jọrọ njọ. Site na ịwụnye nke ọ bụla n'ime ngwa ọrụ Gnu / Linux a, ọ na-esite na Wifi Router dị mfe n'ime ngwaọrụ.
Ezigbo mma, n'onwe m nwere ya na D-Link DIR300 na Lynksys WRT-54GL, ọdịiche sọftụwia nke ndị na - eme njem na - abịa bụ nke dị njọ, ọ bụ ezie na anaghị m enwe ọtụtụ nhọrọ, ọ bụrụ na nkwụsi ike nke netwọk wifi.
Chei, olee otu m ga esi esi mee ka centos logo gosi na mkpado? M na-eji Centos 6 i686 na gnome.
Na Iceweasel ma ọ bụ Firefox ọ dị mfe. Na chrome ị ga-agbanwe ihe a kpọrọ "Onye Ọrụ Onye Ọrụ" ma ọ bụ Onye Ọrụ.
Ndewo, m ga-achọ ịma ma ị maara akwụkwọ ntuziaka ọ bụla iji mejuputa hotspot ma jikọta ya na sava redio.
Kedu maka Sergio, olee otu hotspot, ma eleghị anya ị ga - enyere m aka ịnwa ịnwe hotspot mpaghara na Nodogsplash na tplink 1043nd v3, agbalịrị m ịwụnye oghere na gsplash ọnụ, mana enwere m nsogbu na ịhazi gsplash ọnụ ka m wee redirect na peeji nke nnabata. Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka .. ekele ..
Hood! Are bụghị naanị onye nzuzu, aghaghị m ịbanye OpenWRT n'ụzọ kachasị mgbagwoju anya. Via eriri igwe, ndi na-emegide ya na ihe ndi ozo ... Amutara m ya n'uzo siri ike ... hahaha! Ezigbo ederede. Cheers!
Ndewo msx, amaara m na blọọgụ emeela ochie, mana m nwere mmasị n'ọtụtụ ihe gbasara sọftụwia a wee hụ na ọ dakọtara na onye na-agba ụta c50 nke tp njikọ, mana m ga-achọ ajụjụ ụfọdụ, ndị a
Zaghachi Lorenzo Martin Lobo
Apache ọ na-emepeOOffice Ọdịnihu?